Fanambarana fiarovana ny angona - Church of God Switzerland of the World
Ny Fiangonan'Andriamanitra Maneran-tany (WKG Switzerland) dia mandray tsara ny fiarovana ny angon-drakitrao manokana. Raisinay tsiambaratelo ny angon-drakitrao manokana ary mifanaraka amin'ny lalàna mifehy ny fiarovana ny angon-drakitra sy ity fanambarana fiarovana ny angona ity. Amin'ny fampiasana ny tranokala dia manaiky ny fanangonana, fanodinana ary fampiasana ny angona araka ny voalaza etsy ambany ianao. Ny tranokalanay dia miasa ao amin'ny foibe data Swiss.
Ny tranokalanay matetika dia azo ampiasaina tsy misy angon-drakitra manokana. Ny maningana dia faritra sy serivisy mitaky angon-drakitra manokana (oh: baiko). Ny fampahalalana manokana toy izany dia hampiasaina sy hotehirizina ho an'ny tanjona voafaritry ny mpandraharaha na vokatry ny votoatin'ny tranokala ary tsy hampitaina amin'ny antoko fahatelo raha tsy misy ny fanekenao mazava.
Asongadinay fa ny fampitam-baovao amin'ny Internet (ohatra amin'ny fifandraisana amin'ny alalan'ny E-Mail) dia afaka mampiseho ny tsy fahampian'ny fiarovana. Ny fiarovana tanteraka ny angona avy amin'ny fidirana amin'ny olon-kafa dia tsy azo atao.
Ity tranonkala ity dia mampiasa ny antsoina hoe cookies. Ireo dia manatsara ny tolotra ataontsika ho mpinamana kokoa, mandaitra ary azo antoka kokoa. Cookies dia rakitra lahatsoratra kely izay tehirizina ao amin'ny solosainao ary tehirin'ny navigateur.
Ny ankamaroan'ny mofomamy izay ampiasainay dia manan-kery mandritra ny taona maro ary mijanona ao amin'ny fitaovanao mandra-pikafanao azy ireo. Ireo cookies ireo dia manome alalana anay, ohatra, hahafantatra ireo toe-javatra izay nataonao ary nampitombo ny fisakaizan'ny mpampiasa.
Azonao atao ny mametraka ny navigateur ka hampahafantarina anao ny fametrahana cookies ary avelao ihany ny mofomamy amin'ny tranga tsirairay, anisany ny fanekena ny mofomamy amin'ny tranga sasantsasany na amin'ny ankapobeny, ary ampiharo ny mamafa fandroahana cookies rehefa mihidy ny navigateur. Raha misy mofomamy ny mofomamy, mety ho voafetra ny fampiasa amin'ity tranokala ity.
Rakitra rindrambaiko log
Ny mpamatsy an'ity tranokala ity dia manangona sy mitahiry fampahalalana amina fisie hiantsoana mpizara lozisialy, izay ampandehanana ny fampitaovana anao ho azy. Ireto ny:
Daty / fotoana
antsoina hoe pejy
Nofafana ho an'ny mpizara an-tserasera ity rakitra ity aorian'ny herinandro. Izahay dia manana zo hizaha io data io amin'ny fomba tsy miangatra raha toa ka lasa fantatsika ny fanondroana manokana momba ny fampiasana tsy ara-dalàna.
Politika momba ny tsiambaratelo momba ny endrika fifandraisana
Raha mandefa ny fangatahana amin'ny alàlan'ny taratasy fifandraisana ianao, dia ho voatahiry ny antsipiriany avy amin'ny fangatahana fanamafisana, anisan'izany ny antsipirian'ny antsipiriany omena anao, mba hikarakarana ny fangatahana sy ny fanontanian'ireo fanontaniana. Tsy hizara ity vaovao ity izahay raha tsy misy ny fanekenareo.
Matomo (famakafakana isan-karazany)
Ireo angon-drakitra manaraka dia angonina sy voatahiry ao anatin'ny rafitry ny Matomo:
ny adiresy IP an'ny solosaina mangataka (tsy fantatra anarana alohan'ny fitahirizana)
Daty sy ora fidirana
ny tranonkala nanaovana ny fidirana (URL referrer)
ny anarana sy ny URL rakitra nalaina
ny navigateur ampiasaina (karazana, dikan-teny ary fiteny),
ny rafitra fiasan'ny solosaina
Ilay firenena niaviany
Matomo dia mampiasa mofomamy izay voatahiry ao amin'ny solosain'ilay mpampiasa ary mamela ny famakafakana ny fampiasana ny tolotra an-tserasera ataon'ny mpampiasa. Ny mombamomba ny mpampiasa solosaina dia azo namboarina avy amin'ny angon-drakitra. Ny cookies dia manana fotoana fitahirizana iray herinandro. Ny fampahalalana mofomamy momba ny fampiasana ny tranonkala ity dia tsy voatahiry ao amin'ny mpizara fotsiny ary tsy ampitaina amin'ireo antoko fahatelo.
Ireo mpampiasa dia afaka manohitra ny angon-drakitra tsy fantatra anarana amin'ny alàlan'ny programam Matomo amin'ny fotoana rehetra izay mety hitranga.
Ity tranokala ity dia mampiasa ireo antsoina hoe endri-tsoratra nomen'ny Google ho fampirantiana fanamiana ireo endritsoratra. Rehefa miantso pejy ianao, dia ampidirin'ny mpitety anao ao amin'ny cache navigateur ireo endri-tsoratra ilaina mba hampisehoana tsara ny lahatsoratra sy ny endritsoratra.
Mba hanaovana izany, ny navigateur ampiasainao dia tsy maintsy mifandray amin'ireo mpizara Google. Izany dia manome fahalalana an'i Google fa ny tranokalanay dia nidirana tamin'ny alàlan'ny adiresy IP-nao. Google Web Fonts dia ampiasaina amin'ny tombotsoan'ny fampisehoana fanamiana sy manintona ny tolotray an-tserasera. Izany dia maneho tombontsoa ara-dalàna araka ny hevitry ny andininy faha-6 (1) (f) GDPR.
Raha tsy mahazaka endri-tsoratra amin'ny Internet ny navigateur dia endri-tsoratra mahazatra no hampiasain'ny solosainao.
Raha te hahalala misimisy kokoa momba ny Google Web fonosana, jereo https://developers.google.com/fonts/faq sy amin'ny politikan'ny fiainana manokan'ny Google: https://www.google.com/policies/privacy
Ity tranokala ity dia mampiasa SSL encryption noho ny antony fiarovana sy hiarovana ny fandefasana ny votoaty miafina, toy ny fanontanianao izay alefanao aminay ho mpandraharaha tranonkala. Azonao atao ny mamantatra fifandraisana voaroaka amin'ny alàlan'ny fiovan'ny tsipika adiresy ny zon'ny adiresy amin'ny «http: //» ka «https: //» ary amin'ny alàlan'ny sarin'ny hidin-trano ao amin'ny tsipika fijerinao. Raha atao ny fampidirana SSL dia tsy vakin'ireo antoko fahatelo ny angon-drarinao.
Fampiasana ny fikarohana tranokala Google
Ny tranokalanay dia mampiasa ny "Fikarohana tranonkala Google". Ny mpamatsy dia Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, Etazonia. Ny teny tadiavina dia alefa amin'ny alàlan'ny endrika mankany amin'ny angon-drakitra mba ahafahana mamoaka ny vokatra azo. Na izany aza, tsy misy antontan'isa fikarohana (iza, oviana, inona no nokarohina) voarakitra ao amin'ny tranokala.
Azonao atao ny misoroka ny fitahirizana cookies amin'ny alàlan'ny fametrahana ny logiciel navigateur anao mifanaraka amin'izany. Na izany aza, tianay ny manamarika fa amin'ity tranga ity dia mety tsy ho afaka hampiasa ny fiasa rehetra amin'ity tranokala ity amin'ny ankapobeny ianao. Azonao atao ihany koa ny manakana an'i Google amin'ny fanangonana ny angon-drakitra novokarin'ny cookie sy mifandraika amin'ny fampiasanao ny tranokala (anisan'izany ny adiresy IP anao) ary amin'ny fanodinana ity data ity amin'ny alàlan'ny fampidinana ny plug-in navigateur misy eo ambanin'ity rohy manaraka ity ary apetraho: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Fampidirina serivisy sy votoatin'ny antoko fahatelo
Mampiasa votoaty na tolotr'asa avy amin'ireo mpanome antoko fahatelo izahay ao anatin'ny tolotray an-tserasera mifototra amin'ny tombontsoanay ara-dalàna (izany hoe fahalianana amin'ny famakafakana, fanatsarana sy fampandehanana ara-toekarena ny tolotray an-tserasera araka ny dikan'ny Art. 6 Para. 1 lit. toy ny horonan-tsary na endri-tsoratra (antsoina hoe "votoaty" avy eo). Mihevitra foana izany fa ny mpanome antoko fahatelo amin'ity atiny ity dia mahita ny adiresy IP an'ireo mpampiasa, satria tsy afaka mandefa ny atiny amin'ny navigateur izy ireo raha tsy misy ny adiresy IP. Ilaina noho izany ny adiresy IP hanehoana ity atiny ity. Miezaka izahay ny hampiasa afa-tsy votoaty izay tsy mampiasa afa-tsy ny adiresy IP ny mpamatsy tsirairay mba hanaterana ny atiny. Ny mpanome antoko fahatelo dia afaka mampiasa ireo antsoina hoe marika piksel (sary tsy hita maso, antsoina koa hoe "fanilo web") ho an'ny tanjona statistika na varotra. Ny «tags pixel» dia azo ampiasaina hanombanana ny vaovao toy ny fifamoivoizana mpitsidika amin'ny pejin'ity tranonkala ity. Ny fampahalalam-baovao solon'anarana dia azo tehirizina ao anaty cookies amin'ny fitaovan'ny mpampiasa ary misy, ankoatry ny zavatra hafa, fampahalalana ara-teknika momba ny navigateur sy ny rafitra fandidiana, ny tranonkala manondro, ny fotoana fitsidihana ary ny fampahalalana hafa momba ny fampiasana ny tolotra an-tserasera, ary azo ampifandraisina ihany koa. amin'ny vaovao toy izany avy amin'ny loharano hafa.
Mifanaraka amin'ny And. 32 GDPR, amin'ny fiheverana ny toetry ny zavakanto, ny fandaniana amin'ny fampiharana sy ny karazana, ny sehatra, ny toe-javatra ary ny tanjon'ny fanodinana ary koa ny mety ho fisehoan-javatra samihafa sy ny hamafin'ny risika ho an'ny zo sy ny fahalalahan'ny olona voajanahary, manao fepetra ara-teknika sy ara-drafitra sahaza mba hiantohana ny haavon'ny fiarovana mifanaraka amin'ny loza mety hitranga; Ny fepetra dia ahitana, indrindra ny fiarovana ny tsiambaratelo, ny fahamendrehana ary ny fisian'ny angon-drakitra amin'ny alàlan'ny fanaraha-maso ny fidirana ara-batana amin'ny angon-drakitra, ary koa ny fidirana, ny fampidirana, ny famindrana, ny fiantohana ny fisiana sy ny fisarahan'izy ireo. Fanampin'izay, nanangana fomba fiasa izahay izay miantoka ny fampiharana ny zon'ny lohahevitra angon-drakitra, ny famafana ny angon-drakitra ary ny fihetsiky ny fandrahonana data. Fanampin'izay, raisintsika ny fiarovana ny angon-drakitra manokana mandritra ny fampivoarana na fifantenana fitaovana, rindrambaiko ary fomba fiasa, mifanaraka amin'ny fitsipiky ny fiarovana ny angon-drakitra amin'ny alàlan'ny famolavolana teknolojia sy ny firafitry ny fiarovana ny data (Art. 25 GDPR).
Fanovana ny politika momba ny tsiambaratelo
Izahay dia manana ny zo hanitsy tsindraindray ity fanambarana fiarovana momba ny angon-drakitra ity ka mifanaraka amin'ny fepetra ara-dalàna ankehitriny na koa mampihatra fanovana amin'ny serivisy ataonay ao amin'ny fanambarana ny fiarovana ny data, ohatra. B. rehefa mampiditra serivisy vaovao. Ny fanambarana vaovao momba ny fiarovana ny data dia mihatra amin'ny fitsidinao manaraka.
Ny fahatokisanao dia zava-dehibe aminay. Tianay àry ny hamaly ny fanontanianao amin'ny fotoana rehetra. Raha manana fanontaniana ianao fa tsy voavaly ity fanambarana fanangonam-baovao ity na raha te hahazo fampahalalana momba ny antsipirihany momba ny lafiny rehetra ianao, azafady mba hifandraisa aminay amin'ny fotoana rehetra.
Loharano: Avy amin'ny fanambaràna fiarovana ny data no niandohany e-recht24.de